अब एमाले र राप्रपा एकता होला त ? - jagritikhabar.com
२०७४ असोज १७ मा एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन तालमेल गरेर लड्ने र त्यसपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको ५८ वर्ष लामो टुटफुट र बिग्रहको बाटो सच्याउने गरी २०७५ मा जेठ ३ मा दुई ठूला वाम घटक (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) बीच भएको एकीकरण २९ महिना पनि टिक्न सकेन ।
पार्टी एकता प्रक्रिया नै नटुंगिँदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई टुक्रामा विभाजित भएको थियो । यसैगरी २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सफलता र असफलता, विभाजन र एकता तथा उपलव्धि र कमजोरीको लामो इतिहास पार गर्दै आज नेकपा (एमाले) का रूपमा विकसित भएको छ ।
यस्तै हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डा बोक्ने दलको एकीकरणमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सत्तारुढ दल भाजपाको प्रेरणा रहेको अनुमान गरिरहेका छन् । यसैगरी विगतको पृष्ठभूमिलाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपा एकता दिगो नरहने आशंकासमेत गरिएका छन् ।
पार्टी पार्टीबीच पटक–पटकको विभाजनले पार्टी, कार्यकर्ता र पार्टीले अवलम्बन गरेको विचारको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको तथ्य सर्वविदित छ । नेताहरूको संकीर्ण स्वार्थका कारणबाट भएको हुँदा, पार्टी एकता नभए पार्टी परित्याग गर्न बाध्य हुने धारणा आमकार्यकर्ता पंक्तिबाट आइरहेको थियो ।
हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको एजेण्डा बोकेको एक मात्र दल राप्रपाबाट गत संसदीय चुनावमा एक जना राजेन्द्र लिङदेनले मात्र विजय हासिल गरेका थिए । अन्तत ३ प्रतिशत पनि नपुगेर राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट बञ्चित हुनु परेको थियो ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि हालसम्मको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी र वामपन्थी झुकाव राख्ने विचारधारा र शक्ति निरन्तर हाबी रहँदै आएको छ ।
वास्तवमा राप्रपाले ०६३ अघिको राजनीतिक व्यवस्था र संस्थाको पुनस्र्थापना गर्न खोजेको होइन । परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई समेत चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको शासकीय स्वरूप, राज्य संरचना र सांस्कृतिक व्यवस्था कायम गर्न खोजेको हो । एकीकृत राप्रपाले सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिक कार्यनीति बनाएको छ ।
कम्युनिस्टको विचार र बाटो असफल प्रमाणित भएको सन्दर्भमा राप्रपाको संवद्र्धनवाद राष्ट्रनिर्माणको वैचारिक मेरुदण्ड बन्न सक्छ ।
धर्मको बारेमा नेपालमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । तर धर्मको बारेमा स्वतन्त्र हिसाबले नेपाली जनताले आफ्नो जनमत अहिलेसम्म दिन पाएका छैनन् ।
संविधानमा धर्मबारे के राख्ने, के नराख्ने भन्ने मनोगत अधिकार नेताहरूमा मात्र निहित हुने कुरा होइन । यता साझा र विवेकशील पार्टी एकतापछि (विवेकशील साझा पार्टी)मा पनि पछिल्लो पटक खटपट देखिएको छ । विवेकशील साझा पार्टीमा उठाइएका फरक मतका कारण अध्यक्ष र संयोजकबीच खीचातानी भएको छ ।
पार्टी एकता पश्चात् जुन एजेण्डा लिएर सहमतिमा आएका थिए । तर पछि एकअर्काले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे फरक विचार राखे । धर्मनिरपेक्षता शब्द र सिद्धान्त राम्रो हो ।
तर यसको प्रयोग कहीँ पनि सैद्धान्तिक एवं स्वाभाविकरूपमा हुन पाएको छैन । अध्यक्ष मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहसहितको विचार अगाडि सारेका थिए भने संयोजक मिलन पाण्डले गणतन्त्रको सुदृढिकरण, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा तथा संघीयतामा सुधार आवश्यकता रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरेका थिए ।
धर्म निरपेक्षताबारे एक अर्काले अनेकौं टिकाटिप्पणी आएका छन् । तत्कालीन विवेकशील पार्टी र साझा पार्टी २०७४ साउन ११ मा एक भएका थिए । त्यसपछि २०७५ पुसमा उनीहरू विभाजित भएका थिए ।
२०७७ मंसिरमा विवेकशील र साझा पार्टी एकता भएको थियो । २६ सदस्यीय सचिवालय र ६५र६५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने त्यसबेला सहमति भएको थियो । एकताका बेला ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने सहमति भए पनि महाधिवेशन नहुँदै विवेकशील साझा पार्टी फेरि फुटको स्थितिमा पुग्यो ।
धर्मनिरपेक्षता विश्वका धेरै मुलुकमा विदेशी दबाबमा लादिएको पाइएको छ, नेपालमा पनि त्यही भएको हो । कतै एमाले र राप्रपामा एकताको सहमति भइहाल्यो भने पनि यस्तै हुनेत होइन ?
पटक–पटक हिन्दूराष्ट्र नेपालकै पक्षमा आवाज एवं आन्दोलन उठ्दै आएका छन् । तर अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा सडक आन्दोलनले बलपूर्वक तत्कालै त्यो परिणाम निकाल्दा देशमा हिंसा भड्किन सक्छ, देशमा अशान्ति आउन सक्छ । तसर्थ शान्तिप्रेमी अहिंस्रक नेपालीहरू अरूलाई पनि दुःख हुने बाटोमा हिँड्न सदा अनिच्छुक देखिएका छन् ।